Mamorona infografika miaraka amin'ity fonosana vector malalaka ity. Famoronana an-tserasera
Raiso ity fonosana vector maimaim-poana ity ho an'ny fampiasan'ny tena manokana hamoronana infografika tsara indrindra
Raha mitady fonosana infographic maimaimpoana ianao fampiasana irery ihany Angamba ity iray avy amin'ny DesignShock ity no tianao satria manana kalitao ampy ahazoana tombony betsaka amin'izany.
Fonosana iray miaraka AIs 3 no tafiditra ary izy io dia ampahany amin'ny endrika ara-barotra sy feno an'ny Designshock izay tonga amin'ny safidy tena izy Raha efa mitady fonosana karazana an'ity ianao amin'ny bilaoginao, asa na tranokala anao.
Fonosana mora ny manitsy noho ny fisie Illustrator AI tafiditra ao ary ahafahanao manova ireo singa samihafa araka izay irinao. Miorina amin'ny fonosin'ity tranonkala ity, ampahany amin'ny kinova "bundle" izay misy ny zava-drehetra.
Ny endriny rehetra izay ho hitanao ao dia volo ary afaka ahitsy amin'ny habe na amin'ny famahana. Ny marina dia ny fonosana maimaim-poana dia manana famaranana matihanina tsara ary azo ampiasaina amin'ny zavatra maro. Tadidio fa ho anao manokana sy ho anao manokana izany, raha te hivarotra azy amin'ny fomba rehetra ianao manana ny kinova Pro sy ny Bundle ianao. Raha tsy maintsy mampiasa infografika isan-karazany ianao dia hatahotra anao ity fonosana ity, satria amin'ny ohatra tafiditra sy zaraina eto dia azonao atao ny mahita fa manana kalitao tsara izy ireo.
Ho an'ny fisintomana maimaim-poana dia manana fomba roa ianao, iray amin'ny alàlan'ny mailaka ary iray hafa amin'ny fidirana amin'ny kaontinao Facebook na Twitter. Raha tsy tianao ny hidiran'izy ireo angona sasany amin'ny tambajotran-tserasera misy anao, ny mailaka no safidy tsara indrindra. Mampanantena izy ireo fa tsy hampiasa ny mailaka hanaovana dokam-barotra sy zavatra hafa.
Izay nolazaiko, fonosana infographic vector Azonao atao ny manomboka izao manomboka mampiasa azy amin'ny asa tadiavinao ary manana ohatra iray manontolo amin'ny kalitao sy matihanina tsara hitondra azy any amin'ny taninao manokana.
Azonao atao ny miditra ao Ity rohy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Cartoon vector » Raiso ity fonosana vector maimaim-poana ity ho an'ny fampiasan'ny tena manokana hamoronana infografika tsara indrindra